कृषि बन र त्रिभुवन विश्वविद्यालय बिच जग्गा र सम्पति हस्तान्तरण विवाद - Onlinesamaya.com
२६ साउन, काठमाडौ
कृषि बन विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक एवम जैविक प्रबिधि केन्द्रका निर्देशक, डा. इश्वरी प्रसाद कडरियाले कृषि बन बिज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवन चरम बिबादमा फसेको बताएका छन ।
कृषि विश्वविद्यालय स्थापना भए पनि आकार लिन नपाउदै गहिरो संकटमा फसेको छ । २०७६ मा कृषि बन बिज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवन त्रिवि अन्तर्गतका दुई क्याम्पस रामपुरको कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान केन्द्रीय क्याम्पस र हेटौंडाको वन क्याम्पसलाई गाभेर कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय बनाईएको थियो । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रामपुरमा रहने ऐनमा छ तर दुई क्याम्पस गाभेर विश्वविद्यालय बनाउने भएपछि ती क्याम्पसको सम्पत्ति आफ्नो त्रि बि र एएफयु दुवैले दाबी गरि रहेका छन । त्रिबिले आफ्नो जग्गा भनेर छोड्न मानेको छैन भने एएफयूले अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि यो विषय किनारा लाग्न सकेको छैन ।
हेटौंडामा एकै परिसरमा त्रिवि र एएफयूको वन विज्ञान विषय पढाइ हुने गरेको छ । विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पुगे पनि एएफयूको नाममा जग्गाको लालपुर्जा नभएर बिबाद भएको हो । जग्गाका लागि त्रिविसँग लड्दै आएको एएफयू पछिल्लो समय निरीह जस्तै भएको छ । त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनिया रामपुर पुगेर एक हप्ता अगी त्रिबिको आंगिक कलेजको रुपमा इन्जिनियरिङ कलेज शुभारम्भको औपचारिक घोषणा समेत गरेका थिए ।
दुई विश्वविद्यालयको जागा किचलो उत्कर्षमा पुगे पछी ०७२ सालको चैतमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो । वर्ष दिनपछि उक्त कार्यदलले सुझाव पनि दिएको थियो । त्यसमा रामपुरमा रहेको ३ सय ३८ बिघा जग्गा मध्ये ४० बिघा १९ कट्ठामा त्रिविको भोगाधिकार रहने र हेटौंडाको १ सय ५८ बिघामध्ये एएफयूको भोगाधिकार ६० बिघामा रहने प्रस्ताव छ । जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । दुवै विश्वविद्यालयले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छन तर पुर्ब उपकुलपति प्रा. डा कैलाश प्याकुरेल सिनेट बाहेक अरुले जग्गा सम्बन्धि निर्णय गर्ने नसक्ने बताछन ।